डाक्टरको प्रतीक्षामा वीरको ओपिडी काउन्टरमै वास बस्दै विपन्न नागरिक
काठमाडाैं । सर्लाही बसबरियाकी ७० वर्षीया कुसुन खातुनको दुवै खुट्टाको छाला फुटेर घाउ भएको छ । उनकी बुहारी ४८ वर्षीया मीना खातुनको पनि देब्रे कानमा समस्या छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार नभएपछि सासू–बुहारी काठमाडौं आएका छन् । साथमा, छिमेकी बिरामीहरू पनि छन् । तर, उनीहरू काठमाडौं आएदेखि नै सरकारी डाक्टरको हडतालले जचाउन पाएका छैनन् । काठमाडौंमा उनीहरूको आफन्त कोही छैन, होटेलमा बस्ने पैसा छैन । त्यसैले शनिबारदेखि उनीहरू ओपिडी काउन्टरअगाडि सुत्न बाध्य छन् । डाक्टरको आन्दोलन कहिले टुंगिने हो ? वार्ताको समेत पहल भएको छैन । तर, यो विपन्न परिवार उपचारको प्रतीक्षामा छ ।
समायोजनमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी डाक्टरले सेवाबाट अलग हुने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेका डाक्टरले संयुक्त राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । तर, सरकारले वार्ताको पहल नगरेकाले विपन्न जनताले दुःख पाएका छन् । समायोजन सूची सच्याउनुपर्ने, डाक्टरलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखेर खटाइनुपर्नेजस्ता माग राखेर आह्वान भएको आन्दोलनले सरकारी अस्पतालको सेवा अवरुद्ध छ । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले आफूहरूलाई बाध्य पारिए राजीनामा दिएर अर्को विकल्प खोज्ने बताए । ‘अहिले नै राजीनामा दिने भनेको होइन,’ उनले भने, ‘वार्ता र संवादको मधाध्यमबाट समाधान खोज्छौँ । सुनुवाइ भएन भने अन्तिम विकल्प भनेको सेवाबाट अलग हुनु नै हो । त्यसका लागि हामी पूर्ण तयार भएर बसेका छौँ ।’
सरकारले डाक्टरलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी खटाएको छ । तर, डाक्टरहरूले प्रदेशअन्तर्गत जाँदा आफूहरूको वृत्तिविकास रोकिने भन्दै संघअन्तर्गत नै राख्न माग गरेका छन् । समायोजनअन्तर्गत एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा नहुने व्यवस्था पनि ठीक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।